Transformer Toroidal: ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba an'io singa io | Fitaovana maimaim-poana
Transformer Toroidal: izay rehetra tokony ho fantatrao
Isaac | | Fitaovana elektronika
ny Transformers (toy ny mpanova toroidal) dia singa be mpampiasa amin'ny fitaovana maro. Indrindra amin'ireo izay mampiasa DC, satria avelany handeha avy amin'ny herinaratra avo lenta amin'ny tambajotra elektrika izay ampifandraisina amin'ireo voltages ambany kokoa ireo fitaovana ireo izay matetika miasa (12v, 5v, 3.3v ...) ary avy eo miova avy amin'ny AC amin'ny CC amin'ny fampiasana ny ambin'ny dingana a famatsiana herinaratra.
Ny maha-zava-dehibe azy dia ny tokony ho fantatrao ahoana ny fomba fiasany ity karazana Transformers ity sy ny fampiharana azy ireo, ary koa ny toerana sy ny fomba ahafahanao mividy ny iray amin'izy ireo ho an'ny tetikasanao, sns. Ho voavaha miaraka amin'ity toro-lalana ity ireo fisalasalana rehetra ...
1 Inona no atao hoe mpanova?
2 Inona no atao hoe mpanova toroidal?
2.2 Tombony sy fatiantoka
3 Aiza no hividianana mpanova toroida
Inona no atao hoe mpanova?
Un mpanova Izy io dia singa iray ahafahana mifindra amin'ny voltatera hafa mifandimby mankany amin'ny iray hafa. Izy io koa dia afaka manova ny hamafin'ny ankehitriny. Na izany na tsy izany dia hitazona hatrany ny fatran'ny signal sy ny lanjan'ny herinaratra. Izany hoe, isofrequency sy isopower ...
Ity paramètre farany ity dia tsy mitana ny marina, mety ho ao anaty mpanova teôlôjika idealy izy io, satria amin'ny fampiharana dia misy fatiantoka amin'ny endrika hafanana, iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ireo singa ireo. Izany no antony nivoahany tamin'ny fampiasana coro ferrous henjana mba hamonoana azy ireo (ravina vy vita amin'ny silikone miaraka amin'ny insulation eo anelanelany) mba hampihenana ny onjan-tsiranoka na ny onja parasito.
Mba hahatratrarana ny tanjony, ny herinaratra izay miditra amin'ny alàlan'ny famindrana fidirana dia avadika ho lasa fanindrahindram noho ny fihodinan'ny rivotra sy ny vy. Avy eo, ny magnetism izay mivezivezy amin'ny metallic core dia hitarika hery ankehitriny na elektromagnetika amin'ny familiana faharoa mba hanomezana an'io amin'izao fotoana izao amin'ny vokatra avoakany. Mazava ho azy, ny tariby mitondra ny rivotra dia manana karazana varnish insulate ka, na dia maratra aza izy ireo, dia tsy mifanerasera.
Ny fomba ahafahana miova amin'ny voltre iray mankany amin'ny iray hafa dia ny milalao ny isan'ny fihodinana na ny fihodinan'ny tariby varahina amin'ny fihodinana voalohany sy faharoa. araka Lalàn'i Lenz, ny ankehitriny dia tsy maintsy mifandimbiasana mba hisian'io fiovaovana flux io, ka tsy afaka miasa miaraka amin'ny ankehitriny mivantana ny mpanova.
Araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony, ny fifandraisana Eo anelanelan'ny coil ny voltase sy ny hamafiny dia tena tsotra. Ny N no isan'ny fihodinan'ny familiana (P = voalohany, S = faharoa), fa ny V kosa ny volt (P = ampiharina amin'ny voalohany, S = fivoahan'ny faharoa), na izaho mitovy amin'ny ankehitriny ...
ny ohatra, Alao an-tsaina hoe manana mpanova manana spiral 200 ianao ao amin'ny voalohany ary 100 tadiny ao amin'ny faharoa. 200 volt no ampidirina aminy. Inona ny voltatra hiseho amin'ny fivoahan'ny faharoa? Tsotra be:
Midika izany fa hanova ny fampidirana 220v ho 110v amin'ny fivoahany. Fa raha miverina ny isan'ny fihodinana amin'ny fihodinana voalohany sy faharoa dia hitranga ny mifamadika. Ohatra, alaivo sary an-tsaina hoe ny voltita voalohany mitovy 220v dia ampiharina amin'ny voalohany, fa ny voalohany kosa dia mihodina 100 ary ny faharoa manana fihodinana 200. Ho an'ny vola ity:
Araka ny hitanao, amin'ity tranga ity dia hitombo avo roa heny ny herinaratra ...
Inona no atao hoe mpanova toroidal?
Ny zavatra rehetra nolazaina ho an'ny mpanova mahazatra dia mihatra amin'ny mpanolo endrika, na dia manana endrika samihafa aza ity iray ity, ary koa tombony sasany. Saingy ny fitsipika miasa sy ny kajy dia afaka manampy anao hahatakatra ny fomba fiasany.
Amin'ny geometry, ny torid dia velaran'ny revolisiona vokarin'ny polygon na tsipika fiaramanidina mihidy tsotra izay mihodina manodidina ny tsipika coplanar ivelany izay tsy mifanelanelana. Izany hoe, amin'ny teny tsotra, dia karazana peratra, donut na hoop hoop.
Ny mpanova toroidal dia manome antoka ny fihenan'ny fivoahan'ny rano, ary koa ny fatiantoka noho ny renirano kely eddy noho ny amin'ny mpanova mahazatra. Noho izany dia hanafanana kely kokoa izy ireo ary hahomby kokoa, ary koa ho voafintina kokoa noho ny endrik'izy ireo.
Toy ny mpanova mahazatra, azon'izy ireo natao ihany koa roa miolakolaka, izany dia miteraka coil fampidirana iray ihany, ary coil famoahana maromaro, ny tsirairay dia mety hiova amin'ny tady hafa. Ohatra, alaivo an-tsaina hoe misy roa, ny iray izay manomboka amin'ny 220v ka hatramin'ny 110v ary ny iray izay mandeha 220v ka hatramin'ny 60v, izay tena azo ampiharina amin'ireo famatsiana herinaratra izay ilana tady maro samihafa.
Amin'ity tranga ity, raha tokony hiteraka ny sahan'andriamby Ao anatin'ny fotony metaly toradroa dia misy faribolana concentric ao amin'ny torus. Ivelany dia ho zero ny saha, ny herin'ity saha ity dia miankina amin'ny isan'ny fihodinana ihany koa.
Ny mampiavaka azy iray hafa dia ny saha tsy fanamiana io, mahery indrindra eo akaikin'ny atin'ny peratra ary malemy indrindra ety ivelany. Midika izany fa hihena ny saha rehefa mihalehibe ilay radius.
Ny fifandraisan'ny fahefana Ny fidirana sy ny fivoahana dia miovaova arakaraka ny habeny sy ny toe-javatra iasana, saingy saika mazàna avo kokoa noho ny an'ny mpanova mahazatra. Ary koa, satria ny fatiantoka fanoherana ny mpanova dia avy amin'ny tariby varahina amin'ny coil ary ny fatiantoka ny fotony, ary satria ny toroid dia kely kokoa ny fatiantoka, dia hahomby kokoa izy io satria efa natoroko teo aloha.
ny fampiharana na fampiasana izy ireo dia mitovy amin'ny an'ny mpanova mahazatra. Ny mpanova toroidal dia matetika ampiasaina amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra, zavamaneno, fitaovana fitsaboana, amplifier, sns.
Toy ny mahazatra, ny mpanova toroidal dia manana ny tombony, nefa misy ihany koa ny fatiantoka sasany. eo ny tombony mijoro:
Mahomby kokoa izy ireo.
Ho an'ny inductance mitovy amin'ny solenoid mahazatra, ny toroid dia mila fihodinana vitsy kokoa, noho izany dia matevina kokoa izy io.
Amin'ny alàlan'ny fametahana ny sahan'andriamby ao anatiny, dia azo apetraka akaikin'ny singa elektronika hafa izy ireo nefa tsy misy fanelingelenana avy amin'ny fampidirana tsy ilaina.
teo anivon 'ny fatiantoka Izy ireo dia:
Sarotra kokoa amin'ny rivotra izy ireo noho ny mahazatra.
Sarotra kokoa ihany koa ny mirindra.
Aiza no hividianana mpanova toroida
Afaka mahita azy ireo saika na aiza na aiza ianao fivarotana elektronika manam-pahaizana manokana, na afaka mahazo iray avy any Amazon koa ianao. Ohatra, ireto misy soso-kevitra vitsivitsy:
Fanovana mahazatra 220v ka hatramin'ny 24v.
DollaTek 220v ka hatramin'ny 24v (roa 12v, 12v)
Sedlbauer manomboka amin'ny 230v ka hatramin'ny 24V (dual 12v + 12v).
Tector manomboka amin'ny 230v ka hatramin'ny 12v
Araka ny hitanao dia tsy mitovy izy ireo VA, 100VA, 300VA, sns. Ity sanda ity dia manondro ny enta-mavesatra azo avela fatratra. Ary refesina amin'ny volts isaky ny ampere.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fitaovana elektronika » Transformer Toroidal: izay rehetra tokony ho fantatrao
Lithophany: inona izany ary ahoana ny fanamboarana azy amin'ny fanontana 3D
Karazana kodiarana elektrika efa misy